Demoqraddiyada nololmaalmeedka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Saamayn ku yeelanshada Iswiidhan / Demoqraddiyada nololmaalmeedka
Kor u qaadka demoqraddiyada suuqa shaqada waxaa loola jeeda in shirkadaha iyo ururrada, ay fuliyaan sidii shaqaalaha uga qayb qaadan laahaayeen go'aamada. Dadka dhammaantood waa in ee helaan fursad ee saamayn ugu yeeshaan shaqadooda. Laakiinse weli go'aamada ugu danbeeyo badankood waxaa gaara madaxda.
Kobcinta demoqraddiyada ee dugsiyada waxaa loo jeeda in carruurta la baro, in arrimaha qaarkood ay aragtidooda ka bixiyaan oona is mas'uuliyad qaadan. Macallinku wax kasta go'aan kama gaari karo. Ardayda waxay ka qaybqaadan karaan qorsheyanta waxbarashada.
Demoqraddiyada goobaha guryaha waxaa loola jeeda in dad,a ku nool ay xaq ku leeyihiin go'aan garida. Waxay go'aan ka gaari karaan waxyaalaha wadajirka loogu isticmaalo goobta guryaha.